"တဖက်နှင့်တဖက် NCA အပေါ် နားလည်လက်ခံမှု မတူညီကြရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့အနာဂတ်ခရီး ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားဖို့က လွယ်ကူမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး" » Myanmar Peace Monitor
မေလပထမပတ်က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ်တာဝန်တိုးမြှင့်လိုက်သဖြင့် ဗဟိုနိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ခံဖြစ်လာသူ “နိုင်အောင်မငေး” အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာ ဗညားအောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။
မေး- မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ယေဘူယျအားဖြင့် ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားပါသလဲ၊ သာမန်ပရိတ်သတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ရှင်းပြပေးပါလား?
ဖြေ-ကျနော်တို့ မွန်ပြည်သစ်ဗဟိုအဆင့်မှာ ပါတီရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်ရေးဌာနဆိုပြီး ဌာနကြီး ၃ ခု၊ ပြည်တွင်းရေးရာဌာနကြီးနဲ့ ပြည်ပရေးရာဌာနကြီး ၂ ခု စုစုပေါင်း ဌာနကြီး ၅ ခုရှိပါတယ်၊ ဒီဌာနကြီး ၅ ခုကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် EC တစ်ဦးစီက တာဝန်ယူရတာပါ၊ ပါတီမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ၉ ဦးထဲမှာ ၅ ဦးက ဒီဌာနကြီး ၅ ခုကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်တာပေါ့။
မေး- ဒါဆိုရင် ပါတီရေးရာမှာ နိုင်ငံရေးဌာနရှိမှာပေါ့၊ နိုင်ငံရေးဌာနရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ?
ဖြေ- နိုင်ငံရေးဌာန လက်အောက်မှာ ဗဟိုစည်းရုံးရေးဌာန၊ ပါတီလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးဌာန၊ ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနနဲ့ နိုင်ငံရေးသင်တန်းပေးတာ၊ နောက်ပြီး လူငယ်၊ အမျိုးသမီး၊ ရဲဘော်ဟောင်း တို့လို လူထုလူတန်းစားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်း စသည်အားဖြင့် ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ အဓိကအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေ ရှိပါတယ်။
မေး-နိုင်ငံရေးဌာနဟာ လတ်တလောမှာ ဘာတွေဆောင်ရွက်နေသလဲ?
ဖြေ-နိုင်ငံရေးရာဌာနကြီးအောက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ပါတယ်၊ ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို ဗဟိုကော်မတီ CC တွေဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီကနေ အကောင်အထည်ဖော်တာဖြစ်ပြီး ဥပမာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် နိုင်ငံရေးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်၊ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ပါတီဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေမှာ ကျန် NCA လက်မှတ်ထိုး ၉ ဖွဲ့နဲ့အတူတူ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်၊ တက်အတူ ဆုတ်အတူ အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားရမယ်၊ မိမိပါတီတစ်ခုတည်းရဲ့ အကျိုးအတွက်ချည်းဘဲ မကြည့်သင့်ဘူး၊ မိမိတို့တစ်ပါတီတည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO တွေနဲ့အတူ ချင့်ချိန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးကြပြီး အကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့ပါ၊ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ဘာတွေဆက်လုပ်သွားကြမလဲ ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်သွားကြမှာလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် NCA လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ ဆက်လျှောက်သွားမယ်၊ NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ နားလည်လက်ခံထားသလို အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ထပ်တူနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်နားလည်ထားသလို ကျနော်တို့ဘက်က နားမလည်လက်မခံ၊ ကျနော်တို့ဘက်က နားလည်လက်ခံထားတာကို အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က နားမလည်လက်မခံနိုင်၊ တဖက်နှင့်တဖက် NCA အပေါ် နားလည်လက်ခံမှု မတူညီကြရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့အနာဂတ်ခရီး ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားဖို့က လွယ်ကူမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးက နားလည်လက်ခံမှုတူညီကြမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရမှာပါ။
မေး-မွန်ပြည်သစ်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူထုအခြေပြု အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်မှုရှိနေပါသလဲ?
ဖြေ- ကျနော်တို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ပြည်တွင်းမွန်နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း CSO တွေနဲ့ လုပ်ငန်းဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါရှိပါတယ်၊ မွန်အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့အတူတူ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်၊ အတူတူလက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်သင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အတူတကွဆောင်ရွက်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချို့ကိစ္စတွေမှာ သီးခြားခွဲပြီး ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်း ကျနော်တို့အချင်းချင်း နားလည်မှုရှိကြဖို့ လိုပါတယ်၊ အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကျနော်တို့ အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမှာဖြစ်တယ်၊ အမျိုးသားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း CSO,CBO တွေနဲ့ပါ အတူတကွ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားကြမယ်၊ သူတို့ကလည်း အမျိုးသားရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ တစ်ခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့အတူတကွဆွေးနွေးကြမယ်၊ တိုင်ပင်ကြမယ် အတူတူလက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်သွားကြမယ်၊ တစ်ခုတည်းသော အမျိုးသားရေးပန်းတိုင်အဖြစ်ရှေးရှုပြီးတော့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်။
မေး- အခုဆိုရင် မွန်ပြည်သစ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ပေါလစ်ဗျူရိုတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါပြီ၊ ဘာတွေပြောချင်သလဲ?
ဖြေ-ကျနော့်သဘောဆန္ဒကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၈၈ နှစ်စပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်ကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် မွန်အမျိုးသားရေး၊ မွန်တို့ရဲ့ မိမိကြမ္မာ ဖန်တီးခွင့်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ကြတဲ့နေရာမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို လိုချင်ပါတယ်၊ ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကျနော့်အနေနဲ့ အနှစ် ၃၀ ကျော်ကာလ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရသလို ခုဆိုရင် မွန်ပြည်သစ်မှာ အဆင့်မြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါပြီ၊ ဒီလိုအဆင့်မြင့်တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေ၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာ တာဝန်ယူရတဲ့အခါ ကျနော့်ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် တတ်အားသမျှကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တစ်ဦးတည်းပဲ ဆောင်ရွက်လို့တော့ ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ပါတီဝင်တွေ ရဲဘော်တွေ၊ ဗဟိုကော်မတီတွေ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေနဲ့အတူ တစိတ်တည်းတဝမ်းတည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်၊ တူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကို အရောက်ချီတက်သွားကြတဲ့နေရာမှာ တူညီတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေ ရှိကြပါမှလည်း အောင်မြင်နိုင်မှာပါ၊ အခုလက်ရှိမှာ ကျနော့်ဘဝမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့အတွက် ရှေ့အနာဂတ်မှာဆိုရင် ပါတီလုပ်ငန်းတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုတွေ မွန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ပိုမိုပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆထက်ထမ်းပိုး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။